Intsingiselo ethi "Ukungabi Nontheism"
I-Nontheist Ingenye yeLayibhile yokukholelwa kuThixo
I-Nontheist iyigama elibandakanya iintlobo ezininzi zeenkolelo, zonke ezibonakaliswa ngokungakholelwa kunqulo nawaphi na oothixo, ukukhanyela inkolelo kuothixo, okanye ukukhanyela ukuba kukho oothixo. Unontheist ngumntu ongakholwayo.
Inkcazo ye-nontheist ifana ngokucacileyo nencazelo yokungakholelwa kuThixo . Iingqungquthela "a-" kunye "non-" zithetha into efanayo, into engeyiyo. Ubuxoki bukholelwa kuThixo. Bayibeke kunye kwaye amagama omabili abemi ukungakholelwa ekukholweni koothixo okanye oothixo.
"I-Oxford English Dictionary" ichaza i-nonist theist ngokuthi "Umntu ongeyena mfundiso." Oku kuyafana nokubanzi, inkcazo jikelele yokuba akukhokho uThixo, ngoko ke iilebhile ezimbini zingasetyenziswa ngokuthe tye.
Ukugwema Imithwalo yeLizwi likaThixo
I-label neontheist yadalwa kwaye iyaqhubeka isetyenziselwa ukukhusela umthwalo ongeyonto ozayo kunye ne-label atheist ngenxa ye-bigotry yamaKristu amaninzi angakholelwa kuThixo. Ungazibiza ngokuba ngumntu ongeyonto xa uyazi ukuba igama elingakholelwa kuThixo liza kubangela ubundlobongela kodwa ucinezelekile ukuvakalisa inkolelo yakho okanye ukungakholelwa kuThixo.
I-Nontheism ingasetyenziselwa njengegama le-ambulera elijongene neengcinga kunye nefilosofi ezininzi malunga nokuba ungunkulunkulu okanye oothixo. Nangona kunjalo, abanye abantu basebenzisa i-nontheism isichazi-magama sokungakholelwa kuThixo okanye ukungakholelwa kuThixo ngaphandle kokucacisa ukuba uThixo akakho. Kule tyenziswa, unontheist akanakutshilo ngokucacileyo, "Akukho nto uThixo," kodwa akakholelwa ukuba kukho uThixo.
Abanye basebenzisa igama elithi nontheistic agnosticism, apho kusekho ukungaqiniseki malunga nokuba uThixo ukhona okanye ingaba umgaqo kaThixo awunanto. Kukho ububanzi obuninzi bezinga lika-atheism ne-agnosticism, kunye neontontism ezenza i-ambulera enkulu.
"UMnu [uCharles] Southwell uthathe inkcaso kwixesha elithi Atheism.
Siyavuya ukuba unayo. Siyichitha ixesha elide [...]. Siyisebenzisa kakubi ngenxa yokuba uThixo akwizwi eligqityiweyo. Bobabini abadala kunye nabanamhlanje baye baqonda ngento enye ngaphandle koThixo, nangaphandle kokuziphatha. Ngaloo ndlela eli gama lithetha ngaphezulu kunoma yimuphi umntu onolwazi nangomntu osisigxina avuma oko kuqukwa kuso; oko kukuthi, igama lihamba kunye nemibutho yokuziphatha kakubi, ephikisiwe ngu-Thixo njengokuba ngumKristu. Ukungabikho kwemfundiso yinto evulekileyo yokuvula ukungaqondani okufanayo, njengoko kuchaza ukulula okungavumelekanga kwenkcazo kaThetshi yemvelaphi kunye noorhulumente wehlabathi. "
- uGeorge Holyoake, "Umqiqo," 1852
"Ukwahlukana phakathi kobuqhetseba kunye no-nontheism akukona ukuba umntu wenza okanye akakholelwa kuThixo. [...] Ububungqina bubungqina obunzulu bokuthi kukho isandla esithile sokubamba [...] Ukungenzi-theism ukuphumla kunye nokungaqiniseki kweso sithuba samanje ngaphandle kokufikelela kunoma yini ukuzikhusela [...] I-Nontheism ekugqibeleni iyayiqonda ukuba akukho mntwana onokumthemba. "
- IPema Chödrön, "Xa Izinto Ziwela Ngaphandle"
ULeonardo Da Vinci: I-Renaissance Humanist, iNzululwazi, uMculi, iNzululwazi
Iintlukwano kwiNgqiqo kunye neengxabano: Ukuphendula umbuzo ngombuzo
Ikholeji ye-Wooster Admissions
Ukukhawuleza: I-Rate of Change of Velocity
Imfazwe Yehlabathi II: iBoeing B-17 Inqaba yeFlying
Yintoni Intaba Yokunyuka?
Indlela i-Scaffolding Instruction ingayithuthukisa ngayo ukuqonda
Inkcazo yeJografi yeNkcubeko
15 i-Memes iHumorous kunye neeConon kwi-Reform Reform
Izidalwa ezili-10 eziPhambili zeMveli zeNkcazo zanamhlanje
Yiyiphi Inqabile Yokuthetha Nokubhala?
Umqeqeshi wobugcisa kunye ne-Chromatic Black
Isivumelwano sesiFrentshi kunye neeVebhu zeCompound ziSebenza